U jebinta ganacsiga eCommerce ee leh Makhaayadaha | Martech Zone
U jebinta eCommerce ee Makhaayadaha
Jimcaha, Agoosto 10, 2007 Arbacada, Nofeembar 30, 2011 Douglas Karr
Toddobaadkan wuxuu ahaa usbuucii iigu horreeyay ee aan noqdo Agaasimaha Teknolojiyada Wadada. Shirkad da 'yar oo tikniyoolajiyad ah, Patronpath ayaa durba saameyn ballaaran ku yeelatay warshadaha Dalbashada Onlineka.
Si ka duwan shirkado kale oo badan, Patronpath wuxuu diiradda saarey barnaamijyadooda labadaba Khibradda Isticmaalka iyo Is-dhexgalka. Halkii ay u abuuri lahaayeen softiweer iibsadaha, waxay xoogga saarayaan horumarinta softiweerka isticmaaleha.
Shirkaddu waxay qabatay shaqo aan caadi ahayn oo ku saabsan koritaanka iyo tiknoolajiyada labadaba iyada oo la siiyay xaqiiqda ah in aysan dhab ahaantii lahayn farsamo yaqaan 'lahaansho' dalabka. Waxaan lahadlay agaasimaha guud Mark Gallo maanta mana cadeyn karin sida aan ula dhacay.
Shirkaddu way fududahay, si dhakhso leh ayey ganacsigooda ugu hagaajisay meelaha ay Makhaayaduhu ugu baahan yihiin. Kooxda halkaas joogta waa kuwo aan caadi aheyn. Aqoonta ay u leeyihiin warshadaha ayaa ah waxa ka dhigaya wax walba inay shaqeeyaan iyo waxa dhisaya shirkad weyn.
Markaad fiiriso Warshadaha Makhaayada, waxaad u maleyn kartaa inaan ahay nuts si aan ugu boodo fanaankaan. Kala badh makhaayadaha oo dhami way fashilmaan oo farqiga udhaxeeya celcelis ahaan silsilad la'aan, makhaayada qoysku waa mid naxariis daro ah. Farqiga udhaxeeya makhaayada guuleysata iyo maqaayada fashilantay waxay noqon kartaa mid khafiif ah sida timaha… waa halka Patronpath ay ka soo gasho. Ku darista dalabyada khadka tooska ah ee makhaayada si loo qaato iyo / ama la geeyo ayaa ah waxa hadda horusocod ku haya warshadaha.
Waa tan sababta amarrada internetka ay farqiga u sameeyaan:
Dadku waxay dalbadaan cunto dheeri ah markay dalbanayaan qaadista iyo bixinta. Ka fikir arintaas… markaad reerkaaga u kaxeyso makhaayad, waxaad miis ka dalbaneysaa pizza. Markaad dalbaneysid alaab, waxaad dalbaneysaa ku filan quraac ama cunto fudud habeenkii dambe, sidoo kale!
Dadku waxay raadinayaan sahlanaan intan ka badan. Dukaamada cuntada ayaa xirmaya silsiladaha makhaayadaha ayaa sii kordhaya. Sababta waa mid fudud, waxaan dooneynaa inaan waqti badan oo tayo leh la qaadanno qoyskeena marka loo fiiriyo qaab nololeedkeenna mashquulka ah iyo waqti yar oo aan wax ku iibsanno iyo karinno. Haddii aad reerkaaga u heli karto cunno aad u fiican oo aad ku qaadatid inta aad ku sii jeeddo gurigaaga, maxaa diidaya !? Cunitaanka dibaddu waa wax lagu degdegay breaking laakiin inaad ku furato meel qarsoodi ah gurigaaga weli waxay u oggolaaneysaa reerka inay ku soo ururaan miiska.
Nidaam weyn oo dalbashada khadka tooska ah ayaa yareynaya khaladaadka dalbashada waxayna qaadataa ilaha shaqaalaha sidoo kale! Way adag tahay in la qaso amarka markii aad adigu isku dhejinayso, sax?
Weli waxaa jira shaqo badan oo la qabanayo, in kastoo. Ku POS nidaamyadu wali waa kuwo si qadiim ah u qadiimi ah. Ku soo gal celceliska maqaayada waxaadna ka heli doontaa POS adag oo ku shaqeynaya Windows 95 oo ka shaqeynaya keydka macluumaadka! Hubaal, waxaa jira shaashad taabasho qabow… laakiin warshadaha ayaa u bisil in laacib halis ah uu soo galo oo nadiifiyo guriga.
Nidaamyada Dalbashada ee internetka ayaa sameeya farqiga. Ka faa'iidaysiga oo isdiyaari, la POS, Fax, iyo Email Integration - makhaayaduhu waa u xor inay sameeyaan waxa ugu fiican oo ay sameeyaan… iibiyaan cunto iyo adeeg badan oo aad u wanaagsan iyadoo lagu darayo amarro badan iyo kuwa waaweyn! Taasi waa halka aan ka nimid. Waxaan haynaa dalabyo aad u fiican oo ay tahay inaad aragto si aad u rumaysato. Shirkadda iyo warshadaha ayaa u bisil qaadashada waxaanan noqon doonaa kuwa ugu fiican!
Halkan Indianapolis, waxaan ku fulineynaa barnaamijkeena Brewhouse ee Scotty.
Ku soco wax kasta oo 'Scotty' ah waxaad isla markiiba ogaan doontaa in khibraddu ay ku saabsan tahay adeegsadaha iyo in lagu daro tiknoolajiyada. Adiga oo ah taageerayaasha Colts, kursi kasta oo ka tirsan Scotty's waa kursi hore maadaama aqal kasta uu leeyahay telefishin LCD u gaar ah! Hubso inaad sidoo kale u hubiso iyaga qadada sidoo kale… waxay leeyihiin menu $ 5 weyn!
Hubso inaad u sheegto Doug ka yimid Wadada ku soo diray!
Bare Barebones sheeko kumbuyuutar ah adiga for
Agoosto 22, 2007 saacaddu markay ahayd 10:33 PM
Waxaan sameeyay waxyar oo barnaamijyada google ah laakiin kaliya emaylka.
Bogga bilowga ah ee aad sameysay wuxuu umuuqdaa mid hagaagsan.
Waxaan doonayaa inaan isku dayo taas
May 28, 2012 at 4: 23 PM
Waxaan arkay xal cusub oo loogu magac daray Cun Online oo u muuqata inay tahay
xitaa ka dheereeya oo ka jilicsan kuwa kale, ma aragtay?